Yeisk - जहाँ धेरै रूस आफ्नो गर्मी छुट्टी खर्च Azov, समुद्रको एक रिसोर्टमा शहर छ। तर हामी यस लेखमा स्थानीय आराम को आकर्षण रंग छैन र सम्भावनाहरू त्यहाँ घर जान जाँदैछन् मानिसहरू हुन् के को धेरै व्यावहारिक प्रश्न ध्यान मा, रोस्तोव मा Yeisk बाहिर प्राप्त छन्। सबै पछि, ठूलो पर्यटक रेल र विमानहरु यो ठूलो शहर आफ्नो मूल मुलुकमा पठाइएका छन्। कहिलेकाहीं यो सबै सडक छुट्टी सिजन मा समुद्र नेतृत्व बताए छ। तर तपाईं बारेमा सबै भन्दा राम्रो फर्केर जान कसरी विचार गर्नुपर्छ जब एक समय त्यहाँ आउँछ। यस लेखमा हामी यो विषयमा अनुभवी यात्री देखि सल्लाह संकलन गरेका छन्। पछिल्लो मिनेट मा समस्या चलान गर्न दयालु यसको बारेमा सोच्नुहोस्। विकल्पहरू यस्ता केही फर्कन, र तिनीहरूलाई को एक, तपाईंले सडक बाट के चाहनुहुन्छ निर्णय गर्नुपर्छ जब - सुविधा, गति, वा दुवै।
183 किलोमिटर, यदि तपाईं कार द्वारा यात्रा गर्दै - Yeisk र Rostov दूरी बीच। म तीन घण्टा यात्रा गर्न छ। धेरै मार्गहरू, तर टूरिस्ट सामान्यतया दुई रुचाउँछु। पहिलो - यो संघीय राजमार्ग M4 ( "डन") मा छ। तर यो चोटी मौसममा ट्राफिक जाम हुन सक्छ। तेजी अग्रिम सक्छन् पनि Roadworks रोक्नुहोस्। तपाईं दोश्रो विकल्प प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। P250 र R268 - यो दोस्रो महत्व सडक छ। तिनीहरूले गाउँमा र Aleksandrovka Peshkovo मार्फत नेतृत्व। तर एक-तरिका यी सडक मा आन्दोलन, त्यसैले overtaking मा जाने धेरै गाह्रो हुनेछ। र वास्तवमा, दुवै अवस्थामा तपाईँले आठ सय rubles पेट्रोल लागि खर्च हुनेछ। तपाईं पनि सेवा सँगी यात्री पाउन सक्नुहुन्छ "Blah Blah कार।" प्रति व्यक्ति दुई सय rubles देखि - त्यसपछि सडक तपाईं एक धेरै ठूलो रकम खर्च हुनेछ। केही अनुभवी चालकहरू Kushchevskaya को गाउँमा, र Azov शहर मार्फत मार्ग सिफारिस गरिएको। सडक तिनीहरूले एक घरेलू मानक मानिन्छ गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा खराब छैनन्। अचानक हराएका प्राप्त गर्नुभयो भने, दिशा निर्देशन लागि अनुरोध गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। स्थानीय चालक तपाईं सबै शो र बताउन खुसी।
रेल र हवाइजहाज
तपाईं पहिलो बस वा यात्रुवाहक रेल स्टेशन Starominskaya प्राप्त गर्न पर्छ Rostov उच्च गतिको रेल रेल द्वारा - मार्ग Yeysk हटाउन। त्यहाँबाट रात र अन्य लामो-दूरी रेल जानुहोस्। तर तपाईं रेल मा पाङ्ग्रा को ध्वनि अन्तर्गत लामो यात्रा आपत्ति छैन भने र यसलाई पौधे रुचि छैन, त्यहाँ तपाईं लागि एक विकल्प छ। यो रेल "Eisk - मास्को" संख्या 232. अन्तर्गत गर्मी मा हरेक दिन चल्छ र आफ्नो अन्तिम स्टप - कुर्स्क स्टेशन। तर पनि Rostov मार्फत यो बित्दै। बिहान दस वरिपरि Yeisk बाट रेल र उसलाई एउटा टिकट प्राप्त गर्न 45 दिनको लागि राम्रो छ। पत्रुस देखि रिसोर्टमा पहिले ट्रेलर कार गए। अब 245S रेल दिन मार्फत जान्छ। त्यसैले, तपाईं अझै पनि यो मा Rostov मा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर यो विकल्प सबैका लागि छैन। यसबाहेक, तपाईंले यस रिसोर्टमा आउन भने राजधानी, तर रूस टाढा क्षेत्रका - एकाटेरिनबर्ग, मागाडान, मर्मान्स्क, राम्रो, को पाठ्यक्रम, रोस्तोव बस को विमानस्थलमा प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं तालिम चयन भने, तपाईं पनि रेलवे स्टेशन परिवर्तन गर्न छ।
मार्ग Yeysk - Rostov: बस
यो क्षेत्रीय केन्द्र गर्न रिसोर्ट बाहिर प्राप्त गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय र सर्वाधिक लोकप्रिय तरिका हो। Rostov गर्न बस स्टेशन Yeisk प्रत्यक्ष उडानहरू छन्। यो रिसोर्ट र पारित बसें बाट प्रस्थान। कम - को जाडो र पतन भन्दा गर्मी उडानहरू को गर्मी मा: लक्षण मौसम मा निर्भर गर्दछ। यात्रा समय पनि फरक हुन सक्छ। उहाँले त्यहाँ खडा रूपमा, बसोबास बस बित्दै जो मार्फत खाता, मा लिन आवश्यक छ। तपाईं तीन सडक र पाँच घण्टा आधा मा खर्च गर्न सक्छन्। यो यात्रा को लागत प्रति व्यक्ति पाँच सय rubles सुरु। मौसम र ट्याक्सी यो दिशा मा जानुहोस् - तिनीहरूले भर्न जाने, तर छिटो जानुहोस् र कम रोक्दछ बनाउन।
Yeisk देखि Rostov मा बाटो: रेल
दुर्भाग्यवश, उपनगरीय रेल जडान काम गर्ने छैनन् मा प्राप्त गर्न। Timashevsk - त्यसैले पर्यटकहरु मदत गर्न गेटवे Starominskaya छ। त्यहाँबाट, को रचनाहरूको मा पठाइएका छन् नोवोरोसीस्क, Anapa, एडलर। तपाईंले यो मोडतर्फ रेल स्टेशन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि थप जानुहोस्। तथापि, Rostov मा Yeisk देखि उपनगरीय रेल दुर्लभ जाने, र तपाईं डकिंग संग गणना गर्न सक्दैन। तिनीहरूले आधा घण्टा Starominskaya जाने र टिकट 170 rubles लागत। पहिले Timashevsk पनि बस हुन पुग्यो गर्न सक्नुहुन्छ, र बाँकी अधिकांश गर्छन। सबै Rostov रेल यो स्टेशन यसलाई पछि लागे। Starominskaya देखि सामान्य लोकल रेल र एक्सप्रेस रेल परे जानुहोस्। रेल एउटा टिकट दुई सय rubles भन्दा अलि बढी लागत, र यो दुई घण्टा भन्दा बढी छ। एक्सप्रेस सडक एक घण्टा र चालीस मिनेट मा बिताउनुहुन्छ। टिकट रोपण मा खरिद गर्न सकिन्छ।
ट्याक्सी र शटल
यो सबैभन्दा सुविधाजनक छ, तर यो Rostov मा Yeisk देखि प्राप्त गर्न बन्द-बजेट तरिका हो। ट्याक्सी - परिवहन को साधारण एक महंगा मोड, होइन उल्लेख तपाईं रिसोर्ट शहर बाहिर जाने छ भन्ने तथ्यलाई। तर कुनै पनि टिकट अनुभव बिना र चिन्ता-मुक्त "हावा संग" whisk, को सामान बारेमा न त। कार देखि एक ठूलो परिवार वा समूह वैन गर्न - फ्लिट मा कार धेरै भिन्न छन्। यात्रा समय - बारेमा दुई र आधा घण्टा। ड्राइभर आराम को ठाउँमा सिधै तपाईंलाई र रेल स्टेशन / हवाई अड्डा वा Rostov सही ठाउँमा त लिन हुनेछ। कहिलेकाहीं, अतिथि घरहरू र निजी मालिक Rostov वा Starominskaya एक शटल सेवाको रूपमा यस्तो सेवा आफ्नो अतिथि प्रदान गर्नुहोस्। कहिलेकाहीं उहाँले पनि मूल्य समावेश।
पाकिस्तान जनसंख्या। पाकिस्तान को जनसंख्या
कजान को समकालीन र ऐतिहासिक वास्तुकला
Golitsyno-मास्को: दूरी कसरी प्राप्त गर्न
योजना को एक समीक्षा, लागत र समीक्षा: पोल्याण्ड मा टोल सडक
भ्लाडिभास्तोक आइपुगे नयाँ ढाँचा: "भ्रम पार्क" स्तर रद्द
सुविधा र आकर्षण। Nessebar (बुल्गारिया)।
छाप र समीक्षा: हाइनान
कुलीन shungite कसरी प्रयोग गर्ने? गुण कुलीन shungite
फल हलुआ सूजी र घरेलु पनिर कसरी खाना पकाउनु
रूसमा सबैभन्दा ठूलो निर्माण कम्पनी: एक अवलोकन
को MMORPG मा सुन्दर कुल नाम - यो महत्त्वपूर्ण छ!
आफ्नै हातले पानी को लागि वेल्स Gidroburenie: प्रविधि, उपकरण
चरण-पुत्र - यो के हो र कुन अंकहरूमा मैले ध्यान दिनुपर्छ?
किन बच्चा छैन स्तनपान छ?
कीव: जनसंख्या, यसको संरचना र विकास संभावनाहरु
"एम-150" (सुक्खा मिश्रण) विशेषताहरु, सुविधाहरू, आवेदन
कसरी कब्जियत लागि सन बीउ लिन: समीक्षा
"Sermion": प्रयोग, औषधिको खुराक, गुणहरू लागि निर्देशन